I-FreedomBox, i-YunoHost ne-Plex: Amapulatifomu ama-3 amahle kakhulu wokuhlola | Kusuka kuLinux
I-FreedomBox, i-YunoHost, ne-Plex: Amapulatifomu ama-3 Amahle Wokuhlola
Ngalezi zikhathi ze Ubhubhane lwe-covid-19 futhi of Ukuhlukaniswa komphakathi (Ukuhlukaniswa), abathandi be Ubuchwepheshe, i-Information Technology ne-Computing, bakhethe ukunikela ngesikhathi sabo ekucwaningeni, ekufundeni, ekufundeni, ekuhloleni izinhlelo ezihlukile noma amapulatifomu okufunda, ezokuzijabulisa noma izinsizakalo ezahlukahlukene, ukuze kukhuliswe noma kuthuthukiswe ukukhiqiza noma i ukuphumula ngalezi zikhathi zokuzilibazisa.
Ngakho-ke, kule ncwadi sizokwazisa Amapulatifomu ama-3 athakazelisayo anobubanzi nezinhloso ezifanayo, izingcingo I-FreedomBox, i-YunoHost ne-Plex; lokho ngokuqinisekile kuzoba wusizo futhi kube usizo kwabaningi ngezikhathi ezizayo phakathi kwalesi simo esingahle sibe khona, somhlaba wonke.
Kuyaphawuleka ukuthi namuhla kunanini ngaphambili, ukusetshenziswa kwe- Las amapulatifomu digital, okungukuthi, kwalabo izixazululo eziku-inthanethi (online) evumela ukwenziwa okukodwa noma ngaphezulu imisebenzi (izinsiza, izinhlelo, izinhlelo) ehlukile endaweni efanayo nge-inthanethi Ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene, zibaluleke kakhulu ekugcineni abantu bekhiqiza, bematasa noma bejabulisa emakhaya abo.
Futhi ngakunye kuvame ukuba nakho noma okunikezwayo izici, imisebenzi noma izinzuzo ezahlukene, ezisiza abasebenzisi bazo noma amalungu, ukuze ukuxazulula izinhlobo ezahlukene zezinkinga noma izidingo, ngendlela ezenzakalelayo nokusebenzisa izinsizakusebenza ezingatheni.
Noma kunjalo, ezinye zazo amapulatifomu noma izixazululo, ngokuba mahhala futhi / kuvulekile, ingafakwa phezu amakhaya noma izingosi zomuntu siqu yabasebenzisi bayo, ukuze babe kwabelwane nabanye emphakathininjenge-a isevisi yamahhala noma yezentengiso. Lezi ezi-3 esizozihlola ngezansi zigxile kakhulu kulesi sitayela.
1 Amapulatifomu ama-3 amahle kakhulu ongawabheka namuhla
1.3 I-Plex Media Server
Amapulatifomu ama-3 amahle kakhulu ongawabheka namuhla
Ngokusho kwe- Isiza esisemthethweni seFreedomBox, ichazwa njenge:
"Iseva yangasese yabangewona ochwepheshe ekuvumela ukuthi ufake futhi ulungiselele izinhlelo zokusebenza zeseva ngokuchofoza okumbalwa nje. Isebenza nenqwaba yehadiwe yakho eshibhile noma ekhethiwe eshibhile, ukuxhumana kwe-inthanethi, nokusetshenziswa kwamandla okuvamile, futhi kungaphansi kolawulo lwakho. IFreedomBox iyiFree and Open Source Software kanye nengxenye esemthethweni yakwaDebian, ukusatshalaliswa okumiswe kahle kweGNU / Linux. Iphrojekthi le isekelwa yiFreeBox Foundation engenzi nzuzo".
Abathuthukisi bayo bathembisa ukuba:
"Ukwakha isoftware yamadivayisi ahlakaniphile inhloso yawo yobunjiniyela ukusebenzisana ukwenza lula ukuxhumana ngokukhululeka phakathi kwabantu, ngendlela ephephile nephephile, ngale kwesifiso samandla amakhulu ukungena kubo. IFreedomBox yakha umnyakazo wokubeka phansi i-web. Abasebenzisi bethu bangamaphayona ale nhlangano. Siyingxenye yomphakathi omkhulu weSoftware Free futhi samukela wonke umuntu".
Ngakho-ke ngamafuphi, InkululekoBox kufanele kubhekwe:
"Iphrojekthi yomhlaba wonke yokunika abantu abajwayelekile amandla okulawula ingqalasizinda ye-Intanethi. Isixazululo esivumela abasebenzisi bayo ukuthi bagweme ukumba idatha, ukucwaninga kanye nokuqapha ngamasosisi aphakathi nendawo abonakala kuwebhu namuhla. Ipulatifomu eyakhiwe ngamaseva wewebhu, ayimfihlo, futhi ayabizi, ukuze umsebenzisi akwazi ukusingatha izinsiza zewebhu ezidingekayo ekhaya kudivayisi yempahla yakhe, enikwa amandla yisoftware yamahhala abangayethemba.".
Ngokusho kwe- Isiza esisemthethweni seYunoHost, ichazwa kafushane njenge:
"Uhlelo olusebenzayo lweseva oluhlose ukwenza ukusingathwa kube ngokwakho kuwo wonke umuntu".
Yize, ngokusho konjiniyela bayo, bachaza ngokuningiliziwe ukuthi kuyini:
"Uhlelo olusebenzayo oluhlose ukuphathwa okulula kweseva, ngakhoke lwenza intando yeningi izenzele intando yeningi, ngenkathi iqinisekisa ukuthi ihlala inokwethenjelwa, ivikelekile, inesimilo futhi ayisindi. Yiprojekhthi yesoftware yamahhala egcinwe kuphela ngamavolontiya. Ngokobuchwepheshe, kungabonakala njengokwabiwa okususelwa ku-Debian GNU / Linux futhi kungafakwa ezinhlotsheni eziningi zehadiwe.".
Mayelana I-Yunohost, kubalulekile ukuqaphela ukuthi kubhekwa njenge:
"Isoftware esencane kakhulu, engahlolwa ngezinga elikhulu ngakho-ke mhlawumbe ayilungiselelwe ngokwanele amakhulu wabasebenzisi ngasikhathi sinye".
I-Plex Media Server
I-Plex Media Server, njengoba igama lisho, yisixazululo esichazayo se- Isiphakeli Semultimedia ukubuka noma ukusakaza (ukwabelana) ngokuqukethwe kwe-multimedia phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zamadivayisi. Ngakho-ke, uhlelo lokusebenza esingaguqula ngalo noma iyiphi ikhompyutha ibe yifayela le- Isikhungo Semultimedia (Isikhungo Sezindaba) ngokuqukethwe kwedijithali esikufaka kukho ukuze kuphathwe.
I-Plex Media Server ilawula amafayela we-multimedia ngokuwathola nokuwahlela ngaphansi kwemingcele ehlukene, njengezigaba noma izigaba, ukwenza ngcono ukufinyelela kwawo nokusetshenziswa kwawo. Isizathu sokuthi kungani, kubonakala kwabaningi, njengohlelo lokusebenza olukwazi ukulingisa ukwenziwa kwefayela le- Ikhaya le-Netflix noma elomuntu siqu, ezoba nekhathalogi yokuqukethwe yemultimedia eqondene nomuntu uqobo.
Ekugcineni, kufanele uqaphele lokho I-Plex Media Server iyahambisana namafomethi wevidiyo nevidiyo asetshenziswa kakhulu futhi asetshenzisiwe. Ngaphezu kwalokho, ukuvumela ukuhlela i- okuqukethwe yizinhlobo zamafayela (amavidiyo, izithombe nomculo)kanye ne ngemfihlo ukuxhumana kwangaphandle, uma kwenzeka isetshenziswa noma ifinyelela kude, phakathi kwezinye izikhungo eziningi nemisebenzi eyakhelwe ngaphakathi. Futhi inesevisi eku-inthanethi, engatholwa mahhala futhi ikhokhwe, ngokusebenzisa okulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-3 ezinhle kakhulu amapulatifomu ezinsiza zewebhu, «FreedomBox, YunoHost y Plex» ngalezi zikhathi ze «Pandemia por el COVID-19» y, «Aislamiento social (Cuarentena)»; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-FreedomBox, i-YunoHost, ne-Plex: Amapulatifomu ama-3 Amahle Wokuhlola
UNicolas Solano Conde kusho
I-athikili eveza izinzuzo kuphela ayiphelele. Kwakudingeka ukukhombisa ukulinganiselwa nezindlela ezingenzeka zokuziguqula, noma okungalungile noma ukuziqhathanisa nento efana nomhlaba wesoftware ekhokhelwayo….
Phendula uNicolás Solano Conde
Sanibonani, Nicolás! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Impela kungekudala, sizophawula ngakunye ngokwehlukana, singene emininingwaneni eyakhayo nengeyona, futhi sinikeze ukuqhathanisa. Okwamanje, bekuwukusakaza nje ukuze abantu abaningi babazi.
I-athikili ethakazelisa kakhulu, kepha sidinga ukujula… Ngingagxila kumaseva okulula ukuwasebenzisa ekuchofozeni igundane okumbalwa njengeSyncloud noma iFreedombox noma abanye…. futhi esikhundleni sePlex sikhulume ngoJellyfin ngokuba ngumthombo ovulekile ... Sanibonani
Sanibonani, Martí! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Okuthunyelwe kamuva, sikhulume ngoJellyfin, njengoba ubona kulokhu okulandelayo: https://blog.desdelinux.net/jellyfin-que-es-sistema-instalacion-usando-docker/
Ama-antivirus amaningi angakhutshazwa ngezixhumanisi ezingokomfanekiso
Umhleli we-Bluefish: Inguqulo entsha etholakalayo engu-2.2.11 enesondlo esincane